PDRC iyo SIDRA oo ku loolamaya Puntland! – Idil News
PDRC iyo SIDRA oo ku loolamaya Puntland!
Guuleed Saalax waa in uu kala saaraa Sidra iyo danta guud oo aysan iskaga dhex yaacin.
Guuleed Saalax Gudoomiyaha Gudiga doorashada Puntland ee dhawaan la doortay,isagoo ka faa’idaysanaya saamaynta uu yeeshay waxuu u adeegsaday muquunin awoodeed oo uu kula kacay xarunta muhiimka u ah dalka iyo dadka ee PDRC.
Guuleed oo garab ka helaya Wasiir Dhabancad oo ay muuqato in uu xumaan uhayo xarunta PDRC waxuu ku dhaqaaqay in dhamaan mashaariicdii ama barnaamijyadii ay horay ufulin jirtay PDRC uu uleexiyo Sidra oo ah Machad isagu aas-aasay kana yahay Agaasime.
Barnaamijyada uu leexsaday,isagoo ka faa’idaysanaya saamayntiisa uu ku yeeshay Gudiga doorashada,Gudiga shirka maalgashiga,xiriirkiisa Madaxtooyada iyo isku xirnaanta isaga iyo Wasiir Dhabancad,waxaa ka mid ah.
B.Shirkii isbarida Golaha Wasiirada iyo beesha caalamka oo ay horay uqaban jirtay PDRC.
T.La diyaarinta Golaha Wasiirada barnaamijyadooda 5-ta sano oo ay horay uqaban jirtay PDRC xogo badana ay ka hayso.
J.Abaabulka iyo diyaarinta hab maamuuska shirka maalgashiga oo ay PDRC yaalaan xogo fara badan oo laga diyaariyay ganacsiga iyo maalgashiga Puntland.
Guuleed barnaamijyada uu isku dayay in uu iyagana leexsado isagoo ka faa’idaysanaya saamayntiisa dhinacyada badan leh,waxaa kaloo laga xusi karaa…
B.Hirgalinta nidaamka Xisbiyada badan ee Puntland,kaasoo ay haysatay xarunta PDRC khibrad iyo xog badana ay uhayso.
PDRC waa xarun cilmi baaris oo ay Puntland leedahay,waxaana lagu tilmaami karaa Hantida Qaran ee jirta mid ka mid ah,waana soo jireen xog iyo haldoor fara badan ay ay ku urursan yihiin..
Waa dhab in aysan u hana qaadin sidii la rabay,balse taas macnaheedu mahan in laysku dayo in meeshaba laga saaro ama inta ay qabatay lakala daadiyo.
Dhabancad waa muhiim in uu ilaaliyo dhex-dhexaadnimada masuuliyadu farayso,sidoo kalena ka feejignaado waxyeelida xarumaha muhiimka u ah Umada si walba oo uu tiisa uga dhex arki waayo.
Madaxweyne Deni waxuu ku amaanan yahay in markii cabasho uga timid PDRC uu usara kacay wax la taaban karana ka qabtay.